Ahoana ny fametrahana Discord amin'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Iray amin'ireo efitrano fifampiresahana haingana indrindra ho an'ny lalao izay lasa fotoana ankafizin'ny mpilalao ny fotoana fifandirana. Manana safidy marobe izy, mora ampiasaina, haingana, miaraka amina sehatra filalaovana isan-karazany, ... Na eo aza ny fanohanan'ny ankamaroan'ny sehatra, Discord amin'ny Linux tsy manana fanohanana feno izy io ary ao anatin'ny dingana fanandramana ihany.
ny Mpanamboatra Discord namorona a Drafitra fanohanana Linux ary namoaka kinova andrana natao aza izy ireo antsoina hoe 'Canary Discord'izay azo apetraka sy ampiasaina amin'ny distro Linux isan-karazany. Azo antoka fa tsy tonga lafatra izy io, nefa tena mandeha tsara, ary raha gamer ianao dia maninona raha ampiasaina?
Discord amin'ny Linux
1 Inona no atao hoe Discord?
2 Mametraha Discord amin'ny Linux
2.1 Ampidiro Discord amin'ny Debian / Ubuntu
2.2 Ampidiro Discord amin'ny Fedora
2.3 Mametraka Discord amin'ny OpenSUSE
2.4 Mametraha Discord amin'ny Arch Linux
2.5 Mametraka Discord amin'ny Gentoo
3 Famaranana amin'ny Discord amin'ny Linux
Inona no atao hoe Discord?
fifandirana Izany dia Fampiharana VoIP natao ho an'ny vondrom-piarahamonina filalaovana, izay mamela ny resadresaka am-peo sy an-tsoratra eo amin'ny mpilalao, maimaim-poana tanteraka izy io, azo antoka ary miasa ao Linux, Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS ary tranonkala fitetezana.
Izy io dia safidy tsara indrindra amin'ny TeamSpeak sy Ventrilo lafo vidy, ankoatry ny ahazoana aina kokoa sy azo ampiharina kokoa noho ny Skype, ireo fiasa ireo dia nahatonga an'i Discord hanana ny daty mpampiasa mihoatra ny 26 tapitrisa.
Mametraha Discord amin'ny Linux
Ampidiro Discord amin'ny Debian / Ubuntu
Ny kinova 'Canary Discord'efa voaangona ho an'ny fizarana miorina amin'ny Debian. Ireo mpampiasa an'i Debian, Ubuntu, Mint, na ny derivatives avy aminy, dia tsy tokony hanana olana amin'ny fisintomana ilay .deb avy amin'ny pejy Discord, izay azonao apetraka miaraka amin'ny mpitantana fonosana tianao indrindra. Azonao atao koa ny manaraka ireto dingana manaraka ireto:
Vantany vao vita ny fisintomana dia apetraho fotsiny dpkg.
Raha vantany vao vita dia azonao atao ny mihazakazaka ny fampiharana, ary azo havaozina mora foana koa izy io.
Ampidiro Discord amin'ny Fedora
Misy fonosana ho an'ny Fedora an'ny 'Canary Discord', ao amin'ny trano fitehirizana Copr izy io, ary azo sintonina.
# dnf copr mamela vishalv / discord-canary # dnf mametraka discord-canary
Mametraka Discord amin'ny OpenSUSE
Discord dia tsy manana fonosana ho an'ny OpenSUSE, fa afaka mamadika fonosana Debian mora foana ianao Alien script. Ho an'ity dia tsy maintsy ampidininao ilay fonosana .deb.
Avy eo ampiasao Alien manova ny .deb a .rpm.
$ vahiny -r -c discord-canary-0.0.8.deb
rehefa Alien vita, apetraho miaraka amin'ny Yast2.
Tsy vahaolana tonga lafatra io fa mandeha mandritra ny famoronana mpanjifa Discord teratany ho an'ny OpenSUSE.
Mametraha Discord amin'ny Arch Linux
Misy fonosana tsy ofisialin'ny 'Canary Discord'ao AUR, izay azonao alefa amin'ireto url manaraka ireto, https://aur.archlinux.org/packages/discord-canary/, azonao atao koa ny misintona ny fonosana fametrahana avyhttps://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/snapshot/discord-canary.tar.gz. Amin'izay ianao tsy maintsy mamoaka ny tara, mankanesa any amin'ny lahatahiry cd ary manamboatra azy amin'ny makepkg.
Mametraka Discord amin'ny Gentoo
Azonao atao ny manampy ny takelaka Discord amin'ny fampiasana Gentoo layman.
Avy eo ampio Discord amin'ny teny fanalahidy ekena. Ao amin'ny /etc/portage/package.accept_keywords
Aorian'izany dia afaka mipoitra toy ny fonosana rehetra ianao
# mipoitra --mangataha x11-misc / discord
Famaranana amin'ny Discord amin'ny Linux
Discord amin'ny Linux dia mbola kinova fanandramana an'ity fitaovam-pifandraisana tena tsara eo amin'ny mpilalao ity, mety misy lesoka ahitsy, izay tokony hotaterina ho voavaha. Na dia amin'izao fotoana izao dia tsy ny tsara indrindra amin'ireto manaraka ireto dia mihoatra lavitra ny safidy ny fisokafan'ilay mpitety tranokala rehefa milalao izahay, ary koa tsy mila mampiasa Windows intsony ianao hampiasa azy.
Toy izany koa, ity fitaovana ity dia manana ny fiasa rehetra ahafahana mifampiresaka amin'ny mpiara-miombon'antoka amintsika amin'ny fomba mahomby, manasongadina ny fampidirana amin'ireo kaonty filalaovana ary koa ny mety hamoronana lozisialy tsy miankina.
Miaraka amin'ny fampahalalana avy amin'ny LinuxConfig
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ahoana ny fametrahana Discord amin'ny Linux
Ry Luigys malala: heveriko fa maro ny mpamaky no mahatsikaritra fa i DesdeLinux dia efa miresaka momba ny fizarana samihafa ao amin'ireo lahatsorany. Miarahaba anao !.
Tsara, efa naniry zavatra toy izany aho mba hahafahako milalao Dota miaraka amin'ny namako maro. Rehefa afaka kelikely dia apetrako izy, misaotra androngo.
Mametraka ny kinova 0.0.15 amin'ny opensuse ary tsy manomboka tsara izany: /, mampiseho hadisoana izy, raha mamaha azy aho dia manome hevitra
Salama, manandrana mametraka korontana ao amin'ny Arch Linux (Manjaro KDE) aho ary mametraka ny baiko farany "mkpkg -sri" milaza amiko fa "tsy hita ilay baiko." Nanandrana nametraka azy tamin'ny alàlan'ny horita / pacman / yaourt ihany koa aho saingy ireo rehetra ireo dia manome ahy olana amin'ny famoahana libc ++.
Manantena aho fa afaka manampy ahy ianao ary misaotra mialoha ^^
Mario Mey dia hoy izy:
Misy olana kely amin'ny Debian 11 Bullseye. libappindicator1 dia tsy ao amin'ny tahiry intsony. Misy ny olona manolo-kevitra ny hampiasa ny libayatana ho solon'izay… saingy mbola tsy vitako izany. Izay vaovao ilaina amiko dia hankasitrahana.
Valiny tamin'i Mario Mey